အမေရိကန် ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer က ဂျာမဏီ BioNTech နဲ့ လက်တွဲပြီး စမ်းသပ်နေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာ ရာခိုင်နှုန်း ၉ ၀ ကျော် ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးရဲ့ အလားအလာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့် ရဲ့ အမြင်ကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
အမေရိကန် ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer က ဂျာမဏီက BioNTechနဲ့ လက်တွဲပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၆ နိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ၄ သောင်းကျော်နဲ့ စမ်းသပ်နေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာ ရာခိုင်နှုန်း ၉ ၀ ကျော် ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးရဲ့ အလားအလာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့် ရဲ့ အမြင်ကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ကာကွယ်ဆေးကို ဖေါ်ရာမှာ လူနဲ့စမ်းသပ်တဲ့ clinical trial အဆင့် ၃ ပေါ့နော်။ နောက်ဆုံး အဆင့်ကို ရောက်နေပြီ။ အဲဒီနောက်ဆုံး အဆင့်မှာ လူနဲ့စမ်းတာက ၄၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ စမ်းတယ်။ ဒါက ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လုပ်အားပေး တွေနဲ့ စမ်းတယ်။ ၉ ၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေက ဒီဗိုင်းရပ်စ် ကူးတဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်တယ် ဆိုတာကို ပြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မရှိသလောက် နည်းတယ် ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က result ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင့်။”
မေး။. ။“ဒီလိုမျိုး အခြေနေကောင်းနေတဲ့ ဆေးတခုက FDA အစိုးရ အသိမှတ်ပြုတဲ့ အဆင့်ကို ဘယ်လို အနေထားမျိုး ရောက်မှ သူတို့ ရနိုင်မှာပါလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီဖိုင်ဇာက ထုတ်တဲ့ ဆေးအတွက်ကိုကျတော့ သူတို့က ၂ ကြိမ် ထိုးရမယ်။ volunteer ထိုးပြီးတဲ့ လူတွေမှာ သူက ထိုးပြီးတော့ ၂၈ ရက် အထိကို သူတို့က ခုခံအား ရနိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့ သေချာပြောနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက သူတို့ ပထမအကြိမ် ထိုးတာပေါ့နော်။
ကာကွယ်ဆေး တခုကို ထိုးတယ်ဆိုရင် dose ပြည့်အောင် ထိုးရတယ်။ ပထမအကြိမ်ထိုးမယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ထိုးပြီးရင် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံမလဲဆိုတာ ရှိတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ FDA (Food and Drug Administration) ကနေပြီးးတော့ အရေးပေါ် အခြေနေမှာ သုံးစွဲခွင့် (Emergency Use Authorization) EUA ရဖို့ အတွက်က ၂ လ ခုခံအား ခံနိုင်တယ် ဆိုတာမျိုး ပြနိုင်တယ် ဆိုရင် သူတို့က EUA ရနိုင်တယ်။ ဆိုတော့ ဒီ ၂ လ ခုခံအား ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့ အချက်အလက် data တွေကိုတော့ သူတို့က နောက် နိုဝင်ဘာ တတိယပတ်ထဲမှာ ပြောနိုင်မယ်ပေါ့နော်။”
“ဒါဆို မကြာခင်မှာပဲ ရတော့မှာ ပေါ့နော်။”
“ဟုတ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ရတော့မှာပါ။ တကယ်လို့သူတို့ EUA ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီနှစ်ကုန်ကို သူတို့က သန်း ၅၀ ပေါ့။ dose ထုတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားတယ်။ ၂၀၂၁ ထဲမှာ ဆိုရင် သူတို့ ၁.၃ ဘီလီယန်လောက်ကို ထုတ်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
မေး။. “ဒီဆေးရဲ့ အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင်တွေ ဘယ်လို လေ့လာ သုံးသပ်ပါလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အဏုဇီဝဗေဒ ရှုဒေါင့်က ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီ ဆေးတခု ကြာကြာခံနိုင်လေ၊သူ့ရဲ့ ခုခံအားက ကိုယ့်ကို ကြာကြာ ပေးနိုင်လေလေ ကောင်းလေပဲ ပေါ့နော်။ အခု လေ့လာထားတဲ့ လေ့လာချက်တွေ အကုန်လုံး အတော်များများ အခု သုတေသနလုပ်နေတဲ့ ဆေးတွေ အတော်များများက အချိန်အတိုင်းအတာ တိုနေတဲ့ ဟာတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာ ရှည်လေ ပိုကောင်းလေ ပဲပေါ့နော်။
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ဥပမာ အခု ရာသီတုပ်ကွေးဆိုရင် တနှစ်မှ တခါ ထိုးရတယ်။ တနှစ်တခါ ထိုးရတယ် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ခုခံအား ခံနိုင်အားက ဒီတုပ်ကွေးရာသီ တခုလုံးကို ခံနိုင်ရည် ပေးတယ်။ အဲဒါက ၆ လ တန်သည် ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အခု လောလောဆယ် က ၂ လ ခုခံအား ခံနိုင်အားရှိတယ်ဆိုတာ ပြနိုင်ရင် FDA က ခွင့်ပြုပေးတယ်။ ၂ လက အနည်းဆုံးပေါ့။ ၂ လထက် သူတို့ ဘယ်လောက် ကျော်နိုင်မလဲ၊ ကျော်နိုင်လေ ပိုကောင်းလေပဲ။”
မေး။. ။“ဒါဆိုရင် ဒီဆေး စမ်းသပ်တာကအချိန်ကတော့ စောင့်ရအုံးမှာ ပေါ့နော်။”
“စောစောက dose ကို ၂ ကြိမ် ပေးရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘာကြောင့် ပေးရတယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“သူက ပထမဦးဆုံး initial response ကနဦး တုန့်ပြန်မှု ဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယ်။ ဥပမာ ပြောရမယ် ဆိုရင် ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် ကလေးတွေမှာ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးကို သူ့ course ပြည့်အောင် ထိုးမယ်ဆိုရင် ၃ ခါ ခွဲထိုးရတယ်။ ၃ ခါ ထိုးတဲ့ ထဲက booster ဆိုတဲ့ ဟာက နောက်ပိုင်း အသက်ကြီးမှ ထိုးရတာ။ ၃ ခါ course ပြည့်အောင် ထိုးရတယ် ဆိုတာ၊ ပထမ အကြိမ်ထိုးတယ်။ နောက် လလေး နဲနဲခြားပြီး ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်ထိုးတယ်။ နောက်ပြီး တတိယအကြိမ် ထိုးတယ်။
ဒီ တုပ်ကွေးဆေးမှာ ဆိုရင် ဒီ COVID Vaccine မှာ ဆိုရင် သူက ပထမအကြိမ်ထိုးမယ်။ ၂၈ ရက်ကျရင် နောက်တကြိမ် ထပ်ထိုးမယ်။ အဲဒီအခါ ကျရင် သူ့ရဲ့ ၂ ခါ ထိုးလိုက်ရတဲ့၊ ၂ ခါ ခွဲထိုးလိုက်ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရမယ့် ခုခံအားက ဘယ်လောက် ကြာကြာ ခံမလဲ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးဖြူဥတွေ ထဲက ပထမအကြိမ်က နဲနဲထိုးမယ်၊ နောက်ဒုတိယ အကြိမ်ကျတော့ သူက နဲနဲမြင့်တဲ့ dose နဲ့သူက ထပ်ထိုးမယ်။ ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ သူက မှတ်ဥာဏ် လေ့ကျင့်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ တကယ်တမ်း ကိုဗစ် တကယ် အစစ်ဝင်ပြီ။ ဗိုင်းရပ်စ် အစစ် ဝင်ပြီ ဆိုတဲ့ အခါ ကျရင် သူက ဒဏ် မခံရ ပဲနဲ့ သူက ပြန်ပြီးတော့ တုန့်ပြန်နိုင် အောင် သူတို့က အဲဒီလိုမျိုး လေ့ကျင့်ပေးတာပါ။”
မေး။. ။“အဲဒီ ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါ။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးတဲ့ သဘောတရားက ဘာလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ကာကွယ်ဆေး အနေနဲ့ ဘာကို ထိုးသွင်းတာလဲ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ကာကွယ်ဆေး ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကျမတို့ ခုနပြောတဲ့ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးကိုပဲ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြန်ပြောမယ် ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ် တခုမှာ သူ့မှာ ရောဂါပေးနိုင်တဲ့ဓါတ် ရှိသလို မပေးနိုင်တဲ့ ဓါတ်ရှိတယ်။ အဲဒီ ရောဂါပေးနိုင်တဲ့ ဓါတ် အပိုင်းအစလေး တခုကို ကိုယ်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ခုခံအားသည် သွေးဖြူဥတွေက သူက round လှည့်နေတယ်။ အဲဒီ round လှည့်နေတဲ့ သွေးဖြူဥတွေက ဒီ ဓါတ်ကို တွေ့တယ်။ ဒါက ဗိုင်းရပ်စ် အပိုင်းအစပဲ၊ ဒါက ပြင်ပရောဂါဆိုပြီး ဒါကို တိုက်ခိုက်တယ်။
သူတို့မှာ တိုက်ခိုက်တဲ့ သူရှိတယ်။ မှတ်တမ်းယူတဲ့သူ ရှိတယ်။ မှတ်တမ်းယူတဲ့ သွေးဖြူဥက မှတ်တမ်းယူပြီး သွားလို့ရှိရင်၊ နောက်တကြိမ် တကယ်လို့များ ဒီလူက ဗိုင်းရပ်စ် အစစ်နဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့ အချိန်ဆို၊ ဗိုင်းရပ်စ် အစစ် ဝင်လာပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ မှတ်တမ်းထဲက record ထဲက ပြန်ရှာပြီးတော့ ဒီလိုဟာမျိုးက ငါတို့ဆီမှာ ဝင်ဘူးတယ်။ ငါတို့ ဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ တိုက်မယ်၊ အဲဒါဆို response က. ပိုမြန်တယ်။ ဒါက ကာကွယ်ဆေးရဲ့ သဘောတရားပါ။
အခု ကိုဗစ်မှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီ ဖိုင်ဇာက လုပ်တဲ့ဟာက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ M RNA ကို သုံးပြီးတော့ ထည့်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးပါ။ M RNA ဆိုတဲ့ဟာက ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးဗီဇ ထဲက ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ကို ထုတ်ပြီးတော့ သွင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီလို သွင်းလိုက်တဲ့ အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မှတ်တမ်းယူတဲ့ သွေးဖြူဥတွေက ယူထားမယ်။ ယူထားပြီးရင် တကယ် အစစ်နဲ့ တွေ့ပြီ ဆိုတဲ့ အခါကျရင် သူတို့ တုန့်ပြန်မယ်။ အဲဒါ ကာကွယ်ဆေး ပေးတယ်လို့ ပြောတာပါ။”
မေး။. ။“အဲဒါက လူတွေမှာ အန္တရာယ်မရှိဘူး ဆိုတာ သေချာအောင် ဘယ်လို လုပ်ကြသလဲ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့က viral M RNA ဆိုတာကို သုံးတယ်ဆိုတဲ့ ဟာက viral M RNA မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မျိုးဗီဇမှာ သူက ဒီအပိုင်းက ဒါလုပ်မယ်၊ ဒီအပိုင်းက ဒါလုပ်မယ်။ ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ အခု လုပ်မယ့် အပိုင်းကလေးက၊ ဒီ viral M RNA အပိုင်းလေးက သူက မျိုးဗီဇ ဆိုင်ရာ လေ့လာတဲ့. လူတွေကနေ- ဒီအပိုင်းကတော့ ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ နေရာကို အကျိုး သက်ရောက်မှု မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် မို့လို့ ဒါနဲ့ ခွဲထုတ်ပြီးတော့ ဒီဥစ္စာကို လူတွေ အတွက်ကို အသုံးပြုတယ်။ အဲဒါမျိုး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါရှင့်။”
မေး။. ။“ဒီကာကွယ်ဆေးက လူအတွက် အန္တရာယ် မရှိအောင် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ သီအိုရီနဲ့ အရင် လုပ်ရတယ်။ ပြီးတဲ့ အခါကျရင် သတ္တဝါမဲ့ ၊ သတ္တဝါရှိ၊ အဲလိုမျိုး တွေနဲ့ သူတို့ စမ်းပြီးမှ လူတွေ အဆင့်ကို ရောက်လာတာပေါ့။ သတ္တဝါတွေနဲ့စမ်းတဲ့ အဆင့်မှာ တုန်းက ဘယ်လောက်ပဲ အန္တရာယ် မရှိဘူး ဖြစ်ပစေ၊ လူတွေနဲ့ စမ်းတဲ့ အဆင့်မှာ အန္တရာယ်ရှိလား ဆိုတာကို သူတို့က စမ်းတာပါ။ အဲဒီလို စမ်းတော့ ၉ ၀ % သော လူတွေမှာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်တာတွေ၊ ဖျားပြီးတော့ အသက်ပါ ပါတဲ့ အဆင့်အထိ ဖြစ်တာတွေ ကို သူတို့က လုံးဝမတွေ့ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့က အခြေနေ ကောင်းတယ် လို့ ပြောတာပါ။”
မေး။. ။“အခုလိုမျိုး အလားအလာ ရှိတဲ့ ဆေးတွေ ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေက စမ်းနေလဲ ပြောပြပေးပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အမေရိကား ဘက်က ဆိုရင် အမေရိကန်အခြေစိုက် တခြားကုမ္ပဏီတွေ ဆိုရင် Johnson and Johnson ရှိမယ်။ မာ့ခ် (Merck) ရှိမယ်။ မော်ဒါးနား (Moderna) ရှိပါမယ်။”
အမရေိကနျ ဆေးကုမ်ပဏီ Pfizer က ဂြာမဏီက BioNTechနဲ့ လကျတှဲပွီး နိုငျငံပေါငျး ၆ နိုငျငံမှာ လူပေါငျး ၄ သောငျးကြျောနဲ့ စမျးသပျနတေဲ့ COVID-19 ကာကှယျဆေးဟာ ရာခိုငျနှုနျး ၉ ၀ ကြျော ထိရောကျမှုရှိတယျလို့ နိုဝငျဘာလ ၉ ရကျမှာ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ဒီကာကှယျဆေးရဲ့ အလားအလာ နဲ့ပတျသကျပွီး အဏုဇီဝဗဒေပညာရှငျ မခငျဇာဝငျးပွညျ့ ရဲ့ အမွငျကို ကွညျ့ရအောငျပါ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ကာကှယျဆေးကို ဖျေါရာမှာ လူနဲ့စမျးသပျတဲ့ clinical trial အဆငျ့ ၃ ပေါ့နျော။ နောကျဆုံး အဆငျ့ကို ရောကျနပွေီ။ အဲဒီနောကျဆုံး အဆငျ့မှာ လူနဲ့စမျးတာက ၄၃၀၀၀ ကြျောနဲ့ စမျးတယျ။ ဒါက ကနျြးမာရေး ဆိုငျရာ လုပျအားပေး တှနေဲ့ စမျးတယျ။ ၉ ၀ ရာခိုငျနှုနျးသော လူတှကေ ဒီဗိုငျးရပျဈ ကူးတဲ့ ဒဏျကို ခံနိုငျတယျ ဆိုတာကို ပွတယျ။ နောကျပွီးတော့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလညျး မရှိသလောကျ နညျးတယျ ဆိုတာကို ပွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့က result ကောငျးတယျဆိုပွီး ကွညောခဲ့ပါတယျရှငျ့။”
မေး။. ။“ဒီလိုမြိုး အခွနေကေောငျးနတေဲ့ ဆေးတခုက FDA အစိုးရ အသိမှတျပွုတဲ့ အဆငျ့ကို ဘယျလို အနထေားမြိုး ရောကျမှ သူတို့ ရနိုငျမှာပါလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ဒီဖိုငျဇာက ထုတျတဲ့ ဆေးအတှကျကိုကတြော့ သူတို့က ၂ ကွိမျ ထိုးရမယျ။ volunteer ထိုးပွီးတဲ့ လူတှမှော သူက ထိုးပွီးတော့ ၂၈ ရကျ အထိကို သူတို့က ခုခံအား ရနိုငျတယျ ဆိုပွီးတော့ သခြောပွောနိုငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါက သူတို့ ပထမအကွိမျ ထိုးတာပေါ့နျော။
ကာကှယျဆေး တခုကို ထိုးတယျဆိုရငျ dose ပွညျ့အောငျ ထိုးရတယျ။ ပထမအကွိမျထိုးမယျ။ ဒုတိယအကွိမျ ထိုးပွီးရငျ ဘယျလောကျကွာကွာ ခံမလဲဆိုတာ ရှိတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံ FDA (Food and Drug Administration) ကနပွေီးးတော့ အရေးပျေါ အခွနေမှော သုံးစှဲခှငျ့ (Emergency Use Authorization) EUA ရဖို့ အတှကျက ၂ လ ခုခံအား ခံနိုငျတယျ ဆိုတာမြိုး ပွနိုငျတယျ ဆိုရငျ သူတို့က EUA ရနိုငျတယျ။ ဆိုတော့ ဒီ ၂ လ ခုခံအား ရနိုငျမရနိုငျဆိုတဲ့ အခကျြအလကျ data တှကေိုတော့ သူတို့က နောကျ နိုဝငျဘာ တတိယပတျထဲမှာ ပွောနိုငျမယျပေါ့နျော။”
“ဒါဆို မကွာခငျမှာပဲ ရတော့မှာ ပေါ့နျော။”
“ဟုတျပါတယျ။ မကွာခငျမှာပဲ ရတော့မှာပါ။ တကယျလို့သူတို့ EUA ရခဲ့မယျ ဆိုရငျ ဒီနှဈကုနျကို သူတို့က သနျး ၅၀ ပေါ့။ dose ထုတျနိုငျမယျလို့ မေြျှာမှနျးထားတယျ။ ၂၀၂၁ ထဲမှာ ဆိုရငျ သူတို့ ၁.၃ ဘီလီယနျလောကျကို ထုတျနိုငျဖို့ ရညျမှနျးထားတယျလို့ ပွောပါတယျ။”
မေး။. “ဒီဆေးရဲ့ အလားအလာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အဏုဇီဝဗဒေ ပညာရှငျတှေ ဘယျလို လလေ့ာ သုံးသပျပါလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အဏုဇီဝဗဒေ ရှုဒေါငျ့က ကွညျ့မယျ ဆိုရငျ ဒီ ဆေးတခု ကွာကွာခံနိုငျလေ၊သူ့ရဲ့ ခုခံအားက ကိုယျ့ကို ကွာကွာ ပေးနိုငျလလေေ ကောငျးလပေဲ ပေါ့နျော။ အခု လလေ့ာထားတဲ့ လလေ့ာခကျြတှေ အကုနျလုံး အတျောမြားမြား အခု သုတသေနလုပျနတေဲ့ ဆေးတှေ အတျောမြားမြားက အခြိနျအတိုငျးအတာ တိုနတေဲ့ ဟာတှပေဲ တှရေ့တယျ။ အခြိနျအတိုငျးအတာ ရှညျလေ ပိုကောငျးလေ ပဲပေါ့နျော။
ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ဥပမာ အခု ရာသီတုပျကှေးဆိုရငျ တနှဈမှ တခါ ထိုးရတယျ။ တနှဈတခါ ထိုးရတယျ ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ ခုခံအား ခံနိုငျအားက ဒီတုပျကှေးရာသီ တခုလုံးကို ခံနိုငျရညျ ပေးတယျ။ အဲဒါက ၆ လ တနျသညျ ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ အခု လောလောဆယျ က ၂ လ ခုခံအား ခံနိုငျအားရှိတယျဆိုတာ ပွနိုငျရငျ FDA က ခှငျ့ပွုပေးတယျ။ ၂ လက အနညျးဆုံးပေါ့။ ၂ လထကျ သူတို့ ဘယျလောကျ ကြျောနိုငျမလဲ၊ ကြျောနိုငျလေ ပိုကောငျးလပေဲ။”
မေး။. ။“ဒါဆိုရငျ ဒီဆေး စမျးသပျတာကအခြိနျကတော့ စောငျ့ရအုံးမှာ ပေါ့နျော။”
“စောစောက dose ကို ၂ ကွိမျ ပေးရမယျဆိုတာ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ဘာကွောငျ့ ပေးရတယျ ဆိုတာ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“သူက ပထမဦးဆုံး initial response ကနဦး တုနျ့ပွနျမှု ဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယျ။ ဥပမာ ပွောရမယျ ဆိုရငျ ဘီပိုးကာကှယျဆေး ထိုးတဲ့ဟာကိုကွညျ့မယျ ဆိုရငျ ကလေးတှမှော ဘီပိုး ကာကှယျဆေးကို သူ့ course ပွညျ့အောငျ ထိုးမယျဆိုရငျ ၃ ခါ ခှဲထိုးရတယျ။ ၃ ခါ ထိုးတဲ့ ထဲက booster ဆိုတဲ့ ဟာက နောကျပိုငျး အသကျကွီးမှ ထိုးရတာ။ ၃ ခါ course ပွညျ့အောငျ ထိုးရတယျ ဆိုတာ၊ ပထမ အကွိမျထိုးတယျ။ နောကျ လလေး နဲနဲခွားပွီး ဒုတိယ အကွိမျ ထပျထိုးတယျ။ နောကျပွီး တတိယအကွိမျ ထိုးတယျ။
ဒီ တုပျကှေးဆေးမှာ ဆိုရငျ ဒီ COVID Vaccine မှာ ဆိုရငျ သူက ပထမအကွိမျထိုးမယျ။ ၂၈ ရကျကရြငျ နောကျတကွိမျ ထပျထိုးမယျ။ အဲဒီအခါ ကရြငျ သူ့ရဲ့ ၂ ခါ ထိုးလိုကျရတဲ့၊ ၂ ခါ ခှဲထိုးလိုကျရတဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲက ရမယျ့ ခုခံအားက ဘယျလောကျ ကွာကွာ ခံမလဲ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ခန်ဓာကိုယျထဲက သှေးဖွူဥတှေ ထဲက ပထမအကွိမျက နဲနဲထိုးမယျ၊ နောကျဒုတိယ အကွိမျကတြော့ သူက နဲနဲမွငျ့တဲ့ dose နဲ့သူက ထပျထိုးမယျ။ ဆိုတဲ့ အခါကတြော့ သူက မှတျဉာဏျ လကေ့ငျြ့ပွီးသား ဖွဈသှားမယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူတို့ တကယျတမျး ကိုဗဈ တကယျ အစဈဝငျပွီ။ ဗိုငျးရပျဈ အစဈ ဝငျပွီ ဆိုတဲ့ အခါ ကရြငျ သူက ဒဏျ မခံရ ပဲနဲ့ သူက ပွနျပွီးတော့ တုနျ့ပွနျနိုငျ အောငျ သူတို့က အဲဒီလိုမြိုး လကေ့ငျြ့ပေးတာပါ။”
မေး။. ။“အဲဒီ ကာကှယျဆေး ထိုးတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောပွပေးပါ။ ကာကှယျဆေး ထိုးတဲ့ သဘောတရားက ဘာလဲ။ ခန်ဓာကိုယျထဲကို ကာကှယျဆေး အနနေဲ့ ဘာကို ထိုးသှငျးတာလဲ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ကာကှယျဆေး ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ကမြတို့ ခုနပွောတဲ့ ဘီပိုး ကာကှယျဆေးကိုပဲ ဥပမာ အနနေဲ့ ပွနျပွောမယျ ဆိုရငျ ဗိုငျးရပျဈ တခုမှာ သူ့မှာ ရောဂါပေးနိုငျတဲ့ဓါတျ ရှိသလို မပေးနိုငျတဲ့ ဓါတျရှိတယျ။ အဲဒီ ရောဂါပေးနိုငျတဲ့ ဓါတျ အပိုငျးအစလေး တခုကို ကိုယျထဲကို ထညျ့လိုကျတယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲက ခုခံအားသညျ သှေးဖွူဥတှကေ သူက round လှညျ့နတေယျ။ အဲဒီ round လှညျ့နတေဲ့ သှေးဖွူဥတှကေ ဒီ ဓါတျကို တှတေ့ယျ။ ဒါက ဗိုငျးရပျဈ အပိုငျးအစပဲ၊ ဒါက ပွငျပရောဂါဆိုပွီး ဒါကို တိုကျခိုကျတယျ။
သူတို့မှာ တိုကျခိုကျတဲ့ သူရှိတယျ။ မှတျတမျးယူတဲ့သူ ရှိတယျ။ မှတျတမျးယူတဲ့ သှေးဖွူဥက မှတျတမျးယူပွီး သှားလို့ရှိရငျ၊ နောကျတကွိမျ တကယျလို့မြား ဒီလူက ဗိုငျးရပျဈ အစဈနဲ့ ထိတှရေ့တဲ့ အခြိနျဆို၊ ဗိုငျးရပျဈ အစဈ ဝငျလာပွီ ဆိုတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာ မှတျတမျးထဲက record ထဲက ပွနျရှာပွီးတော့ ဒီလိုဟာမြိုးက ငါတို့ဆီမှာ ဝငျဘူးတယျ။ ငါတို့ ဒီလို ပုံစံမြိုးနဲ့ တိုကျမယျ၊ အဲဒါဆို response က. ပိုမွနျတယျ။ ဒါက ကာကှယျဆေးရဲ့ သဘောတရားပါ။
အခု ကိုဗဈမှာ ဆိုလို့ရှိရငျတော့ ဒီ ဖိုငျဇာက လုပျတဲ့ဟာက ဗိုငျးရပျဈရဲ့ M RNA ကို သုံးပွီးတော့ ထညျ့တဲ့ ကာကှယျဆေးပါ။ M RNA ဆိုတဲ့ဟာက ဒီ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ မြိုးဗီဇ ထဲက ရောဂါဖွဈစတေဲ့ ဓါတျကို ထုတျပွီးတော့ သှငျးလိုကျတယျ။ အဲဒီလို သှငျးလိုကျတဲ့ အခါ ခန်ဓာကိုယျထဲက မှတျတမျးယူတဲ့ သှေးဖွူဥတှကေ ယူထားမယျ။ ယူထားပွီးရငျ တကယျ အစဈနဲ့ တှပွေီ့ ဆိုတဲ့ အခါကရြငျ သူတို့ တုနျ့ပွနျမယျ။ အဲဒါ ကာကှယျဆေး ပေးတယျလို့ ပွောတာပါ။”
မေး။. ။“အဲဒါက လူတှမှော အန်တရာယျမရှိဘူး ဆိုတာ သခြောအောငျ ဘယျလို လုပျကွသလဲ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့။ သူတို့က viral M RNA ဆိုတာကို သုံးတယျဆိုတဲ့ ဟာက viral M RNA မှာ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ မြိုးဗီဇမှာ သူက ဒီအပိုငျးက ဒါလုပျမယျ၊ ဒီအပိုငျးက ဒါလုပျမယျ။ ဆိုပွီး အမြိုးမြိုး ရှိတယျ။ အခု လုပျမယျ့ အပိုငျးကလေးက၊ ဒီ viral M RNA အပိုငျးလေးက သူက မြိုးဗီဇ ဆိုငျရာ လလေ့ာတဲ့. လူတှကေနေ- ဒီအပိုငျးကတော့ ရောဂါ ဖွဈစတေဲ့ နရောကို အကြိုး သကျရောကျမှု မရှိဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ မို့လို့ ဒါနဲ့ ခှဲထုတျပွီးတော့ ဒီဥစ်စာကို လူတှေ အတှကျကို အသုံးပွုတယျ။ အဲဒါမြိုး ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါရှငျ့။”
မေး။. ။“ဒီကာကှယျဆေးက လူအတှကျ အန်တရာယျ မရှိအောငျ သခြောစဉျးစားပွီးမှ လုပျထားတယျပေါ့နျော။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဟုတျကဲ့ သီအိုရီနဲ့ အရငျ လုပျရတယျ။ ပွီးတဲ့ အခါကရြငျ သတ်တဝါမဲ့ ၊ သတ်တဝါရှိ၊ အဲလိုမြိုး တှနေဲ့ သူတို့ စမျးပွီးမှ လူတှေ အဆငျ့ကို ရောကျလာတာပေါ့။ သတ်တဝါတှနေဲ့စမျးတဲ့ အဆငျ့မှာ တုနျးက ဘယျလောကျပဲ အန်တရာယျ မရှိဘူး ဖွဈပစေ၊ လူတှနေဲ့ စမျးတဲ့ အဆငျ့မှာ အန်တရာယျရှိလား ဆိုတာကို သူတို့က စမျးတာပါ။ အဲဒီလို စမျးတော့ ၉ ၀ % သော လူတှမှော အဆိပျအတောကျ ဖွဈတာတှေ၊ ဖြားပွီးတော့ အသကျပါ ပါတဲ့ အဆငျ့အထိ ဖွဈတာတှေ ကို သူတို့က လုံးဝမတှရေ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့ သူတို့က အခွနေေ ကောငျးတယျ လို့ ပွောတာပါ။”
မေး။. ။“အခုလိုမြိုး အလားအလာ ရှိတဲ့ ဆေးတှေ ဘယျကုမ်ပဏီတှကေ စမျးနလေဲ ပွောပွပေးပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အမရေိကား ဘကျက ဆိုရငျ အမရေိကနျအခွစေိုကျ တခွားကုမ်ပဏီတှေ ဆိုရငျ Johnson and Johnson ရှိမယျ။ မာ့ချ (Merck) ရှိမယျ။ မျောဒါးနား (Moderna) ရှိပါမယျ။”